Alarobia Fanosorana lavenona - Fihirana Katolika Malagasy
Daty : 05/02/2008
Ny fonareo no rovidrovito fa aza ny fitafianareo.
Andro fifadian-kanina sy fivalozana
Efapolo andro fiomanana amin'ny Paka  no atombotsika androany. Na dia ankalazaintsika isan-kerinandro aza ny Pakan'i Kristy, dia misy ny fotoana hankalazana azy manokana. Fotoana handalinana ny Famindram-pon'Andriamanitra, hoy ny Papa  izao fotoana izao, ka hahatonga antsika koa ho mpamindra fo ny rahalahintsika. Tohin'izay efa nolazainy antsika tamin'ny herintaona (Hijery izay nolefonina izy) dia manisy trindrim-peo manokana momba ny fiantrana ny Papa amin'ny hafany amin'ity Karemy ity.
Fanehoana ny fo mivalo ny lavenona hahositra ny handrintsika . Samy mahatsapa anefa fa tsy lalana indray andro ny fibebahana fa ezaka sy tolona mandritra ny fiainana manontolo . Aza adino ary, araka ny fangatahantsika amin'Izy Tompo amin'ny vavaka Prefasy  hoe "ny fifadian-kanina atao no hanaketrahana ny haratsiana sy hanondrotana ny fanahy ka hahazoana hery sy valisoa".
 40 andro satria mba hanomezana lanja ny alahady, izay noheverina ho Pakan'i Kristy mandrakariva, na mandritra ny karemy aza, dia tsy isaina anatin'ny 40 andron'ny Karemy. Karemy, avy amin'nny teny latinina quadragesima (ara-bakiteny : efaapolo andro).
 Jereo Hafatry ny papa amin'ny karemy 2008 : teny frantsay
 Hafatry ny Papa (note 2)
 Henoy ny vavaka fanamasinana ny lavenona
 40 andro, isa simbolika milaza ny faharetana sy ny fitozoana.
 Ny antony hanolorana ny Fisaorana.
< Alahady I Karemy Taona A
Alahady faha-4 mandavantaona Taona A >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0796 s.] - Hanohana anay